ရှူးတိုးတိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရှူးတိုးတိုး
Posted by water-melon on Oct 27, 2011 in Copy/Paste | 25 comments
ဟိုတစ်လောက ရွာကအသိတစ်ယောက်ကပြောတယ်။သူတို့မှာ ဖုန်းဆက်ရင် ခိုးပြီးဆက်ရတယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲလို့မေးကြည့်တော့ ရွာထဲက လူတွေကနားထောင်ကြလို့လဲ။ ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်
ဘယ်လိုနားထောင်တာလဲ ဖုန်းဘေးနားလာပြီး နားထောင်တာလားလို့။ မဟုတ်ဘူးတဲ့တော့ ရေဒီယိုနဲ့နားထောင်ကြတာတဲ့။ ဥပမာပြောပြရင် မြို့က လူတစ်ယောက်က ရွာကိုဖုန်းဆက်ရင် ရွာမှာဖုန်းထောင်ထားတဲ့ပိုင်ရှင်က လော်နဲ့အော်ပြီး ရွာမြောက်ပိုင်းက ဦးတုတ်ကြီး မြို့က မော်ဒယ်မဘယ်သူ ဖုန်းဆက်တယ်အမြန်လာပါလို့အော်ခေါ်တယ်။ အဲဒီချိန်မှာ ရွာသူရွာသားတွေက ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ ရေဒီယိုလေးတွေဖွင့်ပြီး နားထောင်ကြတာတဲ့။ အဲဒလိုဖမ်းနားထောင်ကြတော့ သူများအတင်းအဖျင်းမပြောရဲဘူးတဲ့။ တော်ကြာနားထောင်နေတဲ့သူက သူ့အတင်းပြောတယ်ဆိုပြီးရိုက်မှာစိုးလို့တဲ့။
မိုက်တော့မမိုက်ဘူးဗျ ရည်းစားတွေဆိုရင် သနားပါတယ်။ ဖုန်းထဲမှာ အိစိကလိတွေပြောနေတုန်း နားထောင်နေကြရင်ရှက်စရာကြီး။
တို့mandalaygazette မှာတော့ ခိုးနားမထောင်ကြပါဘူးနော်။
ရေဒီယိုနဲ့က ဖမ်းချင်တိုင်း ဖမ်းလို့မရဘူးထင်တယ်။
ကားထဲမှာ ပါတဲ့ရေဒီယိုမှာလည်း တစ်ခါတစ်ခါ ဖုန်းလိုင်းက အသံတွေ
၀င်နေတတ်တာ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ်က နားထောင်ခဲ့ဘူးတယ်။
သေချာ နံပတ်ကို ချိန်ပြီးတော့တော့ ဖမ်းလို့မရဘူးနဲ့တူတယ်။
နားလည်တဲ့ လူတွေ ရှင်းပြကြပါဦး။
ကျွန်တော် မေးကြည့်ပေးမယ်။ ရွာကလူတွေကတော့ ဖမ်းတတ်တယ်ဗျ။ တကယ်အမှန်ပြောတာပါ။ မလိမ်ပါဘူး။
အဲလိုဖမ်းမကြည့် ရွာထဲမှာပြောနေကြတယ် ဘယ်သူသမီး သူရည်းစားနဲစကားပြောတာဘယ်နှစ်နာရီကြာတယ်တိုဘာတို့
အတွင်းရေးအကုန်သိကြတယ် စိတ်လေတယ် ရွာဓလေ့ကြီ……..
နယ်မြို့လေးတွေမှာ မြို့လေးက ကျဉ်းတော့ သူတို့ မြို့သား အချင်းချင်း ဘယ်အိမ်က ဘယ်သူ အီးပေါက်လဲ ဆိုတာ သိတယ်တဲ့.. အဲလိုကို ကြွားတာ..
ရွာထဲမှာ ဘာဖြစ်လဲ သိချင်ရင် ဦးလေး အမဲဆီ ကို မေးကြည့် အကုန်သိတယ်။ ဟိဟိ
လိုင်းပူးတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ခေါ်တာ ထင်ပါ့
ဥပမာ-စနေဒေါင့် ၊ည ခုနစ်နာရီဆို..သာအေးနဲ့ ..ဂွမ်းဂွိ ကြူနေရင် မိနိုင်တယ်..
ရာဟုဒေါင့်က ဖမ်းရင် ဘီလူးနဲ့ ..ဘီလူးမတို့ပြောတာ မိနိုင်တယ်..
မောင်ပေါက်ဖော်နဲ့ ….ရှာရာပိုဗာ တို့ .ကြူနေတာတွေဘာတွေ ကြားရင်ကြားရမှာဗျ
ကိုပေါက်နော် ကျွန်တော် ရှာရာလေးကို မထိပါနဲ့။ သူ့ခမှာ တင်းနစ်ရိုက်တိုင်း ရှုံးနေလို့ ညတိုင်း ကျွန်တော်ဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး ငိုရှာတယ်ဗျ။ သနားလိုက်တာဗျာ။ ရင်ထဲကို ဓာတ်လိုက်တဲ့ အတိုင်းဘဲ တဒိန်းဒိန်းနဲ့။ သူက မန်းလေးလာချင်တယ်ဗျာ။ မလာနဲ့လို့ အတင်းပြောထားရတယ်။ သူ့ဆီကို သွားဖို့ကလည်း မဖြစ် အအေးကြောက်တယ်ဗျ။ ချစ်ခြင်းကိုခွဲရင် ကိုပေါက်ကို မခေါ်တော့ဘူးနော်
ဟေ့…မင်းတို့ ပေါက်ကရပြောတာ ငါ့ရှာရာပိုဗာလေးကို ဆွဲမထည့်ပါနဲ့…။ သူ့ခင်မျာ တင်းနစ်လည်းရိုက်ရသေး ကြောင်ကြီးကိုလည်း ပြုစုရသေး ပင်ပန်းရှာပါတယ်ကွာ၊ နှမသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာကြပါ..။ :mad:
ဂွင်ဘဲ၊ အညင်ကတ်တဲ့လူကို ဖုန်းထဲကအတင်းတုတ်ရင်း ပေါ်တင်ဆဲလို့ရဘီ။ သူအနားရောက်မှ မကြားတကြားပြောနေစရာလိုတော့ဘူး။ နိပ်တယ်။
အဲလိုလည်း တမင်သက်သက်ချိန်ပြီး ဖမ်းလို့ရသလား
တစ်ခါတစ်လေတော့ လိုင်းပူးသလိုနဲ့ ဖုန်းလိုင်းတွေ ဝင်ဝင်လာတာ ကြုံဖူးတယ်
ဒီလိုတာ ဖုန်းပြောတိုင်း ရေဒီယိုနဲ့က ဖမ်းချင်တိုင်း ဖမ်းပြီးနားထောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့
မလွယ်ဘူးပဲ .. ရွာက သမီးရည်းစားတွေပြောပါတယ် ဒုက္ခကမသေးဘူးပဲ ဟူးးးးးးးး
ညီလေးရေ။ လိမ်တယ်လို့ မပြောပါဘူးကွ။
တစ်ခါတစ်လေ ကားရေဒီယိုထဲတောင် ၀င်တယ်လို့ ပြောထားသေးတာပဲ။
သိချင်တာက ဖုန်းတစ်လုံးကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ချိန်ရွယ်ပြီး ဖမ်းလို့ရသလားဆိုတာပါ။
ရတယ်ဆိုလို့ နည်းလမ်းလေးများသိရင် ရှယ်ပေးပါဦးကွာ။
ဟုတ်မေးပေးမယ် အစ်ကို blackchaw။ ဘယ်လိုင်းကဖမ်းလဲဆိုတာ။
သူတို့က စက်ကရိယာအစုံရှိမှ ဒီမှာက ရေဒီယိုနဲ့တင် ရတယ်… မဆိုးဘူဗျ
အဲဒါ အမှန်ဘဲ ကိုဘီလူးပြောတာ
၉၇/၉၈ လောက်တုန်းက ဝါးတားမယ်လွန် ပြောသလို မျိုးကြုံခဲ့ဖူးတယ်
ကျူရှင်ဆင်းရင် အကိုက ကားနဲ့ လာကြိုတယ် ။ သူက အဲ့တုန်းက ကားဝယ်ရောင်း ။ ရန်ကုန်ဆင်း ၊ သင်္ဘော ချ တွေ လိုင်စင်တစ်ခါထဲ လုပ် ၊ ပြီးရင် မန်းတလေး မောင်းလာပြီးရောင်း ၊ တရုတ်ပြည် တက်ရောင်း ။
အဲ့တုန်းက ကားမျိုးစုံ စီးခဲ့ဖူးတယ် ။ ကားတိုင်းမှာ ပါတဲ့ ကက်ဆက် ၊ စီဒီပလေယာ နဲ့ ဆောင်းစစ်စတမ်တွေက ရှယ်တွေ ကို ။ ဝါသနာတွေက မသေးတော့ ၊ ဖွင့်စရာ သီချင်းခွေ မပါရင် ရေဒီယို ဖွင့်ပြီး ကလိတော့တာဘဲ ။ သိပ်အကြာကြီး မရှာရပါဘူး ။ ဟိုလှည့်ဒီလှည့် နဲ့ တန်းမိတာဘဲ ။ အဲ့တုန်းကတော့ ဆယ်လူလာ ဖုန်း နဲ့ ပြောကြတဲ့ စကားသံတွေ လို ထင်တာဘဲ ။ အခုတော့ ဝါးတားမယ်လွန် ပြောမှ ပြန်သတိရမိတယ် ။
ဟုပ်တယ် ဗျ ။ ကျွန်တော် ကြုံဖူးတယ်ဗျ ။ မုံရွာ မြို့အ၀င်နားက ရွာလေးမှာ ။ အဲလိုပဲ လော်နှင့်အော်တာ ။ တစ်ကယ်… တစ်ကယ် ။ ရေဒီယို နဲ့နားထောင်လို ရမှန်း မသိလိုဗျာ ။ သိများ သိရင် ခိုးနားထောင်ခဲ့ပါတယ် ။ ရွာသူကြီးဆီကို မယ်တော် မိုးဟေကို ဖုန်းဆက်တာဆို လား ။ ဆက်ကျေးတောင်းတာ ထင်ပါတယ်ဗျာ ။ ဟီး….
မိုးဟေကိုလို့ ပြောမှသတိရတယ်။ ကြုံတုန်းပြောပြအုန်းမယ်။ မိုးဟေကို လက်သစ်ပေါ်နေပြီဗျ။ ရွာထဲမှာ ပုံတွေတင်လို့ရလား။ နည်းနည်းတော့ အမြင်ရိုင်းမယ်ဗျ။ ကဲ လော်ကြီးနဲ့ ဆော်အောလိုက်ပါပြီ။ မနက်ဖြန် သူကြီးမွေးနေ့ဗျ။ အမေရိကကို အလည်ခေါ်မယ် ကြားတယ်ဗျ။ ဗီဇာဆိုလား ပီဇာဆိုလား မရှိလို့မလိုက်တော့ပါဘူး။နောက်မှ လာလည်တော့မယ်နော့ ဟီးဟီး
Celebrity ဆို တင်ပေးဘာ..တင်ပေးဘာ…
အိုကေ ကိုပေါက်ဖော် နောက်ရက်တင်ပေးမယ်။
97-98 ဝန်းကျင်လောက်က ဘုရင့်နောင် ဘက်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရေဒီယိုဖွုင့် ပြီး BBC လိုင်း လျှောက်ရှာနေတုန်း တခြားသူတွေ ဖုန်းပြောနေတာကိုနားထောင်ခဲ့ဖူးတယ်.. လိုင်းတော့ သိပ်ကောင်းကောင်း မကြည်ဘူး.. (အထင်တော့) ဖရီကွမ်စီ တူသွားတယ်ထင်တယ်.. လွန်ခဲ့တဲ့ ၄-၅ နှစ်လောက်တုန်းက ဒီမလေးရှားမှာ စက်ရုံကပေးထားတဲ့ အိမ်မှာ နေနေတုန်း သူငယ်ချင်းတွေ ယောင်္ကျားလေးတွေသဘာဝ ဟိုကား ဒီကား အသံတိတ် ကြည့်နေတာကို နောက်တစ်နေ့ မှာ ဘေးအိမ်က မလေး အဘိုးကြီး (ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး) သတိပေးပါတယ်.. ဘာကြောင့်ရယ်မသိ ဒီဘက်အခန်းက ဒီဗွီဒီ ကြည့်တာ သူတို့ ဘက်အခြမ်းက တီဗွီမှာလည်း(တီဗွီလိုင်း မမိတမိပုံစံမျိုး) လာပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တီဗွီကို တခြားနံရံဘက်အခြမ်းမှာရွှေ့ ထားဖို့ လာပြောဖူးပါတယ်.. ဟိုးအရင့် အလျင် ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်နဲ့မျိုးကျော့မြိုင် ဖုန်းဇာတ်လမ်းဆိုပြီး ပေါ်ခဲ့ဘူးပါတယ်.. အပုပ်ချ လုပ်ကြံထားတာလား မသိ……..
ပေါက်ဖော်နဲ့ ကိုပေါက် ကို ကွဲပြားအောင်ရေးကွာ။
ဒီလိုလုပ် မင်းက ရှာရာဗိုပါကို ယူလိုက်
ပေါက်ဖော်ကို ရှာအပိုပါ ဆိုတဲ့ မင်းကောင်မလေးရဲ့ ညီမလေးနဲ့ချိတ်ပေးလိုက်.။
ဖုန်းလိုင်းမမိတဲ့ဒေသတွေမှာ လိုင်းရှိတဲ့နေရာကနေ ကောဒ့်လတ်အထိုင်စက်ကိုထိုင် လိုင်မမိတဲ့နေရာမှာ အထိုင်စက်နဲ့ handset ကိုထားတယ်။ အထိုင်နှစ်ခုဆက်သွယ်မှုက fm wave ။ဒါကြောင့် radio မှာ fm လိုင်းမှာရှာရင် မိပါတယ်။နယ်ရွာတွေမှာ ဖုန်းလာကြောင်း လော် နဲ့အော်ရင် ကြားတဲ့သူက radio ဖွင့်နားထောင်ကြတာပါ။ပုံမှန်သုံးနေသော ကြိုးဖုန်း၊ဟန်းဖုန်းများဖမ်းယူမရပါ။
(007James ပြောတဲ့ AM/FM cordless phone နည်းနှင့်မဆိုင်)
ဟားဘတ်တက္ကသိုလ်..နည်းပညာရောင်းစားလိုက်ရင်.. ဒေါက်တာဘွဲ့တခုပါ အချောင်ရဦးမယ်..။
အင်တာနက်က ၀ယ်လို့ရတဲ့ဒေါက်တာမဟုတ်ဖူးနော.. တကယ့်ဒေါက်တာ..။
မြန်မာပြည်ထဲ.. မေတ္တာပို့တယ်..ပို့တယ်ဆိုပြီး.. မေတ္တာတွေ လေလှိုင်းကလွှတ်ပို့လို့ရနေတော့ကာ..
လျှိူ့ဝှက်…ဂမ္ဘီရ.. ဟိုဒီရ. နည်းပညာရှိချင်ရှိနေမှာ.. )
Depending on the phone system’s technical features. Cellular phone calls usually are not picked up by electronic devices such as radios and baby monitors. But analog cell phone transmissions can be received by radio scanners, particularly older model scanners and those that have been illegally altered to pick up analog cell phone communications. Analog cell phones have largely been replaced by digital technologies, which are more secure, more efficient and provide better quality.
ကျွန်တော်ကတော့ တွေ့လည်း တွေ့ဖူးတယ်။ နားလည်း နားထောင်ဖူးတယ်။ ရေဒီယိုနဲ့ နားထောင်လို့ ရတာက များတော်အားဖြင့် အရင်တုန်းက ချပေးထားတဲ့ ကြိုးဖုန်းတွေပါ။ ရှေ့ မြို့ နံပတ်နဲ့ ဖုန်းတွေပေါ့။ ဥပမာ မကွေးဆိုရင် ၀၆၃ နဲ့ စတဲ့ ဖုန်းတွေမျိုးပါ။ နောက်ပိုင်း ပေါ်လာတဲ့ CDMA တို့ GSM တို့ ကျတော့ ရေဒီယိုနဲ့ ခိုးနားထောင်လို့ မရတော့ဘူး။